अहिले राम्रा साहित्य लेखिन थालेका छन्- बुद्धिसागर - साहित्य - साप्ताहिक
अहिले राम्रा साहित्य लेखिन थालेका छन्- बुद्धिसागर
कार्तिक ७, २०७२
लेखक बुद्धिसागर युवा पुस्ताका आशा लाग्दा प्रतिभा हुन् । कविता लेखनबाट साहित्यमा प्रवेश गरेका बुद्धिसागरको पहिलो उपन्यास ‘कर्णाली ब्लुज’ ले बिक्री र प्रशंसा दुवै कीर्तिमान कायम राखेको छ । आफूलाई पूर्णकालीन लेखकका रूपमा स्थापित गरेका बुद्धिसागरले आफूलाई लेखनबाटै जीविका चलाउने युवाका रूपमा पनि उभ्याएका छन् । यसपटक साप्ताहिकले बुद्धिसागरसँग लामो कुराकानी गरिएको थियो ।
इन्टरनेटको आगमनसँगै संसारभर पुस्तक पढ्नेहरूको संख्या घट्दै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो कत्तिको सत्य लाग्छ ?
इन्टरनेटका कारण संसारभरि पुस्तक पढ्नेहरूको संख्या बढेको छ । प्रेसमा छापिएका पुस्तक पढ्न कम भए पनि इलेक्ट्रोनिक भर्सनमा पुस्तक पढ्नेहरूको संख्या बढिरहेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भने इन्टरनेटका कारणले प्रिन्ट गरिएका पुस्तक नै बढी बिक्री भएको पाएको छु । फेसबुक, ट्विटरजस्ता सोसल मेडियाका कारण पाठकहरूले पुस्तकका सम्बन्धमा बहस गर्ने, राम्रा पुस्तक सिफारिस गर्ने काम भैरहेको छ । पहिले यो काम समालोचकको मात्र हुन्थ्यो । अहिले पाठक शक्तिशाली भएर आएका छन् । मेरो अनुभवमा इन्टरनेटले नेपाली साहित्यको विकास नै गरिरहेको छ ।
नेपाली सन्दर्भमा दसैं–तिहार फुर्सदको समय मानिन्छ । यो समयलाई पुस्तक अध्ययन गर्ने समय बनाउन केले रोकिरहेको छ ?
चाडपर्वमा पुस्तक पढ्ने वातावरण त्यति हुँदैन । टाढा–टाढाबाट आउने आफन्त एवं परिवारका सदस्यहरूसँग भेटघाट गर्ने, प्रेम साटासाट गर्ने अवसर हो यो । नेपालीहरू सामाजिक प्रवृत्तिका छन् । हामी आफन्त, परिवार तथा ठूलाबडालाई महत्व दिन्छौं । त्यसैले यो समयमा लामो बिदा भए पनि पुस्तक पढ्न सकिँदैन । जबकि यतिबेला धेरैको गोजीमा पैसा हुने भएकाले वर्षभरि निस्किएका पुस्तक किन्ने चलन छ । यतिबेला किनिएका पुस्तक फुर्सदमा पढिएको पनि पाएको छु ।
अहिलेको मौसममा नयाँ पुस्ताले कुन–कुन पुस्तक पढ्नुपर्छ भन्ने मान्नुहुन्छ ?
हामी राजनीतिबाट दिक्क भएका छौँ, अलिकति मुड फ्रेस हुने, साहित्यिक मूल्य भएका एवं आफ्नो रुचिका पुस्तक पढ्नुपर्छ ।
चलचित्र र पुस्तक अध्ययन गर्नुमा कति फरक छ अथवा पुस्तक नपढे के कस्तो घाटा हुन्छ ?
फुर्सदमा चलचित्र हेर्नु ठीकै हो, तर चलचित्रले मानिसमा भएको कल्पनाशीलतालाई मारिदिन्छ । चलचित्रमा त्यही कुरा देखिन्छ, जुन निर्देशकले देखाउन चाहन्छ । जबकि पुस्तकको नायक वा नायिकाको वर्णन, उनीहरूको क्रियाकलापलाई आफ्नै तरिकाले महसुस गर्न सकिन्छ । लेखकले वर्णन गरेको गाउँसँग आफ्नो कल्पनाको गाउँ जोडिन्छ । पुस्तकका कथाहरूसँग आफूलाई एकाकार गर्न सकिन्छ । नेपाली पाठकहरूले गम्भीर साहित्यभन्दा सामान्य खालका कृति रुचाइरहेका छन्, यसले
नेपाली साहित्यलाई घाटा भए जस्तो लाग्दैन ?
नेपाली पाठकले गम्भीर साहित्य पढिरहेका छैनन् भन्ने म मान्दिन । नेपाली साहित्यका चर्चित कृतिकार बीपी कोइराला, पारिजात, मदनमणि दिक्षितका पुस्तकहरू अहिले पनि नयाँ–नयाँ संस्करणमा आइरहेका छन् । माधवीजस्तो गहन कृतिको पनि बारम्बार पुर्नप्रकाशन भैरहेको छ । नयाँ निस्किएका राम्रो कृतिको बिक्री बढिरहेको छ । फेरी गम्भीर कृति कस्तालाई भन्ने ? यसमा आ–आफ्नो मूल्यांकन हुनसक्छ । कुनै पनि कृतिको मूल्यांकन दुई दशकपछि मात्र हुन्छ । हिजो शंकर लामिछानेलाई चोर लेखक भनिन्थ्यो । भूपि शेरचनलाई तुकबन्दी जोडेर लेख्ने भनेर आलोचना गरिन्थ्यो । पारिजात माक्र्सवादी भइन् भनेर उनको पनि आलोचना हुन्थ्यो । आज उनीहरू नै अमर छन् ।
नेपालमा कस्ता पुस्तकले पाठक र साहित्यको स्तर बढाउन सक्छन् ?
विदेशमा मानिसले जस्तो पुस्तक चाह्यो त्यस्तै पुस्तक उपलब्ध हुन्छ । लामो इतिहास भएकाले सबै उमेर समूहका, सबै विचार समूहका, विभिन्न किसिमका प्रयोग भएका कृति उनीहरूले पढ्न पाउँछन् । नेपालमा भने कि त वाल साहित्य उपलब्ध छन् कि त गम्भीर भनिएका साहित्य । बीचका पाठकहरूका रुचिलाई सम्बोधन गर्ने पुस्तक नै थिएनन् । अहिले विस्तारै सबै उमेर समूहका, सबै किसिमका रुचि भएकाहरूका लागि पुस्तक प्रकाशन हुन थालेका छन् । विभिन्न उमेर समूहलाई नै लक्षित गरेर पुस्तक लेख्ने लेखकहरू पनि जन्मन थालेका छन् र त्यसलाई प्रकाशकहरूले समेत महत्व दिन थालेका छन् ।
अहिले विकसित भएको अर्को पाटो के हो भने अहिले पाठकहरू शक्तिशाली भएका छन् । पहिले ब्रान्डेड लेखकले जे लेखे पनि त्यसलाई स्वीकार गरिन्थ्यो । अहिले लेखकले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । कारण एकसाथ विदेशी पुस्तक र नेपाली पुस्तक पढ्ने पाठक छन् । उनीहरू हाम्रो कृतिलाई विदेशी पुस्तक र लेखकसँग तुलना गर्न सक्छन् ।
कतिपयले के भन्छन् भने पुराना साहित्यको तुलनामा अहिले साहित्यको स्तर खस्किएको छ, सहमत हुनुहुन्छ ?
सहमत छैन । हो, धेरै पुस्तक निस्किएका छन् । धेरै निस्किएकै कारण विविधता आएको छ । दुई दशकपछि अहिले प्रकाशित पुस्तकहरूमध्ये दुई–चार पुस्तकलाई राम्रो पुस्तक भनिनेछ । बाँकी पुस्तक हराउनेछन् । यस्तो पहिले पनि भएको हो र पछि पनि हुनेछ । अहिले नै मूल्यांकन गर्नु हतार हुन्छ ।
प्रकाशित :कार्तिक ७, २०७२
आख्यानले लेखन राम्रो बनाउँछ
हाम्रा चाडपर्व सामूहिक हुँदै गएका छन्
प्रियंकाको जीवनशैली दामी लाग्यो
किन असुरक्षित छन् रेफ्री ?
साफ च्याम्पियनसिपमा कस्ता छन्, नेपालका प्रतिद्वन्द्वी ?
विस्तार हुँदै साहित्यिक गतिविधि जेष्ठ ३२, २०७६
स्कुटीवाली... जेष्ठ २१, २०७६
पाइलटको दैनिकी जेष्ठ १६, २०७६
महफिलमा बुद्धिसागर जेष्ठ १२, २०७६
निरन्तर शनिबारमा हेमका आधा दर्जन कविता वैशाख २९, २०७६
वर्षका उत्कृष्ट पाँच गैर–आख्यान वैशाख ७, २०७६
वर्षका उत्कृष्ट पाँच आख्यान वैशाख ६, २०७६
गंगा सुवेदीको नियालेर आकाश कथा संग्रह सार्वजनिक वैशाख १, २०७६
सौराहामा साहित्यिक जमघट चैत्र २२, २०७५
भित्ताको तस्बिर चैत्र १६, २०७५